Maxaa shalay ka dhacay magaalada Kismaayo oo aadan ka warheynin? (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa shalay ka dhacay magaalada Kismaayo oo aadan ka warheynin? (AKHRISO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa sheegaya in maalintii shalay ay halkaasi ka dhacday doorasho aan hore loo arag, kadib markii la dooran waayay kursi ku celis ahaa oo ka mid ahaa shantii kuraas oo ay hore u laaleen guddiga xallinta khilaafaadka doorashada Soomaaliya.
Guddiga doorashada Jubbaland ayaa kursigaan hore uga mamnuucay inuu u tartamo wasiirkii batroolka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim, waxayna taasi keentay in C/laahi Maxamed Aadan Shaacir uu kusoo baxo kursigaasi, balse ugu dambeyn keentay in guddiga xallinta khilaafaadka uu laalo kurisgaas islamarkaana dib loogu celiyo.
Wasiirka batroolka ee xukuumadda federaalka Soomaaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo C/laahi Maxamed Aadan Shaacir oo maalintii shalay kursigaan markale ku tartamaayay ayaa waxaa dhacday in midkooda uu ku guuleysan waayay kursigaasi.
Guddiga doorashada maamulka Jubbaland ayaa sheegay in tartanka kursigaasi uu ahaa mid la yaableh kadib markii ay sheegeen in codad badan ay xumaadeen islamarkaana lagu wareeray tiradda cod ee uu qofka ku guuleysan lahaa.
Musharixiinta ku tartameeysay doorashadaasi ayaa isla galay illaa labo wareeg, waxaana meesha ka dhacday in lagu wareero natiijadda saxda ah, maadaama codadkii labada musharax ay noqdeen kuwa aan lakala saari karin.
Guddiga doorashada ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in markale lagu celinaayo doorashadaasi, maadaama aan kala caddeyn codadka la dhiibtay iyo codad badan oo xumaadday awgeed.
Si kastaba ha ahaatee, waa doorashadii ugu horeeysay ee kursi xildhibaan lagu kala bixi waayo tan iyo markii la bilaabay doorashada xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo ay doorashadooda ka kala dhaceen caasimadaha magaalooyinka maamul goboleedyadda dalka ka jira.